Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay saraakiishii iyo askartii ku geeriyootay qaraxii Dhanaane – All Bajuni
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Taliyihii, Abaanduulihii iyo askar ka tirsan Qaybta 12-ka Abriil ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday meel u dhaw deegaanka Dhanaane ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kaygaba, waxaan tiiraanyada la qaybsanayaa qoyskii, ehelladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen taliyihii Qaybta 12-ka Abriil Marxuum Janaraal Cumar Aadan Xassan (Cumar Dheere), Abaanduulihiisii Marxuum Janaraal Cabdi Cali Jamaame iyo askartii kale la geeriyootay.”
“Waddani-yiintan naftood-hurayaasha ah waxaa lagu xasuusan doonaa kaalintii ay ka geysteen xoreynta deegaanno badan oo hoos yimaadda Gobolka Shabeellaha Hoose.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda qarax miino oo maanta ay la eegteen gaari ay la socdeen Taliyaha qeybta 12-ka April iyo Abaanduulaha Qeybta, agagaarka deegaanka Dhanaane ee duleedka Koofureed Muqdisho.
Published 4m ago - koyamani • Sponsored post